UPopu uFrancis ubiza iinkokheli zehlabathi kwiVietnam kwi14 Meyi 2020 ngepact yelizwe: Martin Vrijland
Kufakwe kuyo UKUBHALA, Ukupheliswa Ukupheliswa, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-26 Septemba 2019	• 10 Comments
Upapa uFrancis, i-Jesuit Saint Nicholas ngaphandle kwentshebe enamathele, usekela-Yesu Krestu emhlabeni, wabiza i-2 zonke iinkokeli zehlabathi kwiveki ephelileyo ukuba eze eVatican kwi14 ngoMeyi 2020 'ngeP Global Global Proact (isivumelwano sehlabathi). Zimbini izinto ezibalulekileyo kwi-ajenda yale ntlanganiso apho wonke umntu kufuneka eze. Eyokuqala inokufumaneka kumagama akhe okuqala kule ntetho ingezantsi, apho abhekisa kwincwadi yakhe (uxwebhu olunzima loopopu lwemfundiso) evela kwi2015, malunga 'nokutshintsha kwemozulu'. Okwesibini malunga nokukhulisa inani lehlabathi.
'Ndinike iminyaka emine yokufundisa abantwana, kwaye imbewu endiyityalileyo ayisokuze ikhululwe", yingxelo eyaziwayo nguVladimir Lenin. Upapa ke ufuna ukuba iinkokheli zehlabathi zihlangane kwaye umgaqo-nkqubo wehlabathi kufuneka ugqitywe phakathi kwazo zonke iinkokeli zehlabathi kunye nazo zonke iinkolo zehlabathi. Into ebalulekileyo ye-ajenda: ukuhambisa ingqondo kubantwana. Ukudityaniswa kweenkokheli zehlabathi nako kunuka kakhulu kwinto ebisoloko ibonakala njenge-ajenda efihlakeleyo emva 'kwenguqu yemozulu' PsyOp: ukudalwa korhulumente wehlabathi. (funda ngakumbi phantsi kwevidiyo yeYouTube)
"Ewe, ukuba ikho imfuneko yokuba okusingqongileyo kusimanyanise kwinqanaba lehlabathi, ke elo lilinyathelo elilungileyo! Enjani yona ukumangalisa ipapa!", Abaninzi baya kucinga. Upapa ofanayo usecaleni kwecawa ethi nge-27 ngo-Epreli 2014 ibhengeze uLusifa njengoThixo wecawe. Unokungabi nangxaki noku, kuba "Ah, ingaba uthixo nguAllah okanye nguThixo oyindoda okanye owasetyhini okanye uLusifa, ubizwa mahluko muni?Kubaluleke kakhulu kangangokuba kubalulekile ukuba ufumanise ukuba uLusifa ngumakhi wale "indalo"; endikubiza ngokuba 'kukulinganisa'.
Isimboli seLuciferianism ngumbethe wemvula kwaye iinkokeli zehlabathi (zombini ezopolitiko nezenkolo) ngabagcini kunye nabaququzeleli beskripthi esiyinkokheli ekufuneka sikhokelele kurhulumente wehlabathi kunye noluntu lwe-hermaphrodite olulungiselelwe 'izulu elitsha nomhlaba omtsha'. Ukuba "izulu elitsha nomhlaba omtsha" ovela kwiinkolo ngokwenyani yinxalenye ye-AI; ikwabizwa ngokuba sisinye. Eyona njongo kukuba umntu azinikele kwi-transhumanism kwaye afakwe kwinkqubo ye-AI elawula inyani yethu (yobuxoki). Makhe ndicacisele ukuba phantsi kwevidiyo ye-YouTube.
Ukuba sifunda zonke iisimboli ezisirhangqileyo, asinakukwazi ukusilela ukufumanisa ukuba sisebenzisana nemfihlo (kwaye ukusukela nge27 ngo-Epreli 2014 nkqu nasecaleni) ukunqulwa kukaLusifa (jonga ividiyo apha ngasentla). Into edidayo kukuba abantu abanemvelaphi yenkolo bahlala belinganisa uLusifa kunye nengelozi ivela eBhayibhileni kwaye noSathana. Ndiyakucela uyeke la nkqubo yenkolo. Inkolo ingaphakathi kweyona nto ibalulekileyo yabadlali abaninzi yokulinganisa (esiyiqondayo) indlela yokulawula iingqondo ukugcina abantu bekwimigangatho (yendlela) eyoyikisayo yesibini. Ngaphezulu, iicawa ezahlukeneyo zenza ubungqangi obufunekayo ukuthumela umbhalo we-master ngendlela efunekayo; njengoko ukudibanisa kunye nokuncamathela kwebhetri kuvelisa kwangoku ngqo kwicala elithile. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba siphila kwimo yokwenyani (okanye endaweni yoko "ukuqonda") kwaye ke kubalulekile ukuba u eli nqaku qala ukuyifunda ngokucokisekileyo. Ngaphandle koko, yonke into endiyithethayo apha ivakala njenge-abracadabra epheleleyo kwiindlebe zakho.
Sibona ngokucacileyo ukuba i-ajenda iqalisa ukuveza amanqaku amaxesha ngamaxesha kwicala likaLusifa. I-transgender okanye 'ukungathath' icala ngokwesini 'yanamhlanje ikwaxhaswa luphawu lomnyama. Oko kugcwala kwemvula kuku zonke iintlobo zamabali asentsomini nawenkolo kwilizwe lonke, efanekisela umhlaba omtsha emva konogumbe (bona ngcaciso). U-Thixo wabonakalisa umnyama engazange ibonwe ngaphambili esibhakabhakeni njengomqondiso emntwini. "Wabuya ke wathi: "Nguwo lo umqondiso womnqophiso endiya kuwunika phakathi kwam nawe, nayo yonke imiphefumlo, ekuni, kwizizukulwana ngezizukulwana."Umzekelo, sifumana iBhayibhile. Luphawu lwenkolo ke olo. Kwindalo, ukubonakala komnyama emoyeni wesibhakabhaka sisiphumo sokuqhuma kwesibane. Kwinqaku elinesihloko esithi "Kutheni le nto i-transgender iba yinto eqhelekileyo kule nkulungwane ye-21 kwaye inyani inyamalala"Ndathi uLusifa nguThixo ozifihle zonke iinkolo. ILusifa ikwabizwa ngokuba sisiphatheli sokukhanya kwaye ke oko kuqekeka kokukhanya kuyo yonke imibala yomnyama kuyinto enye into ebonakalisa uphawu lokuchukumisa kwezenkolo.
Isimboli sikaLusifa yibhafu enentloko ephindwe kabini uBaphomet. Yiyo ke loo nto, ngokusebenzisa i-LGBTI yokusasazeka, ubuntu kufuneka butshintshwe buthi "ukungathathi cala ngokwesini" (igama elimnandi "hermaphrodite" okanye "bisexual"). Ikhonkco phakathi kwophawu lwentshukumo ye-LGBTI (umnyama) kunye neLusifa ngoku icacile kuwe. Sibona i-ajenda yaseLuciferian yenguqu yehlabathi. Kumele ukuba kubekho unogumbe omtsha, ngokungathi kunjalo. Kwaye loo mkhukula usondele. Ngokudluliselwa kwe-transgenderism (ngokubhekisele kwindoda ebambelele ebusheni be-hermaphrodite) silungiselelwe ukutshintsha, ukudibana kunye ne-AI kunye nokunyuka kwaphezulu elitsha nomhlaba omtsha.
Yam incwadi entsha Ndicacisa ngokweenkcukacha ukuba kutheni iziprofetho ezivela kwiicawa ezahlukeneyo zehlabathi zidlala indima kwiskripthi esikhulu, esona sigcinwe yiVatican kunye neendawo ezimanyene negazi. Ndikwacacisa ukuba zii-avatars kwesi simulation eziqhutywa ngumakhi weli sekulingisa. Bathumela iskripthi se-master ukukholisa ubuntu ukuba buzinikele ngokuzithandela kwizicwangciso zikaLucifer's. Oko 'kukuzithandela' kubalulekile, kuba abadlali bokuqala bokulinganisa (ukwazi kwakho) kufuneka bahlale bekhethe ngokukhululekileyo (kungenjalo bekungayi kuba kukulinganisa, kodwa ifilimu emiselweyo). Iziprofetho ezahlukeneyo zonqulo zithetha ngokuza komesiya evela ezulwini. Ewe, iicawa ezohlukeneyo zinembono ephikisanayo, kodwa loo nto iphikisayo iyafuneka ukuvusa ubungqindilili obuya kukhokelela kwimfazwe yokugqibela ejikeleze i-Yerusu kunye nokudala ucwangco kweziphithiphithi.
I (elindelwe ngamakholwa) umesiya uya kuthi ngayo nayiphi na imeko ehle 'esibhakabhakeni'. Kule mihla sisoloko sifumana igama elithi 'isibhakabhaka' xa kuziwa ukugcina iifayile zethu. Senza oko 'kwilifu'. Umesiya 'wezulu elitsha nomhlaba omtsha' uya kuthi ke ngoko ehle kwakhona 'kwilifu' kwaye asenze siqiniseke ukuba singenyuka ngokuzithandela 'ezulwini elitsha nomhlaba omtsha'. URay Kurzweil (CEO eGoogle) uxele kwangaphambili kwincwadi yakhe ethi 'I-Singularity ikufuphi' ukuba kwixesha elizayo siza kuphila siphakamiso olungenakohlula olokwenene. Ndixela kwangaphambili ukuba 'izulu elitsha nomhlaba' womesiya olindelekileyo iya kuba yinto yokulinganisa. Yenzelwe ukuba ubuntu buyekise uhlobo lwendalo yayo (eyona ayibikho, kuba sivele "siphila emfanekisweni") kwaye sisebenzisa ukuqonda kwayo kwasekuqaleni (oko sikuko ngokwenene) kunye ne-Luciferian AI (le ndawo ikhoyo ngoku) isiqhulo (runction run). Ndichaza injongo yoku kakhulu kum incwadi entsha, kodwa inokushwankathelwa ngolu hlobo lulandelayo: Intsholongwane kaLuciferian AI ifuna ukusebenzisa ikhowudi yokudala (stem cell) yokwazi kwethu kwasekuqaleni "iseli yeseli yobukho”Ukungena ukuze sitshabalalise indalo yonke (esiyila ngayo sithi).
IVatican inenxaxheba ekuqhubeni ukwenza urhulumente wehlabathi apho umesiya weLuciferian avatar eya kuhlala etroneni. Lo mesiya uza kuzisa "izulu elitsha nomhlaba omtsha" kunye "neYerusalem entsha." Kuya kufuneka emva koko ucinge malunga nokulinganisa okutsha. Elo themba lentlawulelo ngomesiya kunye nesithembiso sezulu elitsha nomhlaba kunye nobomi obungenasiphelo (i-transhumanism), nangona kunjalo, sisisulu sobusi esilingisa uluntu ukuba luzinikele kwi-AI yeLuciferian eqhuba intshukumisa yethu yangoku yentsholongwane. Silingwa ukuba sidibane nenkqubo ye-AI yentsholongwane: inkqubo ye-AI yentsholongwane kaLuciferiya eqhuba simulation yethu yangoku. Sukwenza oko!
Kutheni le nto abantu behendelwa ekufezeni ukungafi kunye nokudibaniswa ne-AI
tags: 14 Meyi 2020, 2020, eziziimbalasane, Francis, jikelele, melwano, papa, urhulumente wehlabathi
26 Septemba 2019 kwi-20: 11
Ewe ewe .. ngokwenene:
Kanye ecaleni kweVictoria Star Observatory kwiNtaba iGraham eTucson, Arizona (USA) iteleskopu ye-LucIFER yakhiwa:
Iiteleskopu ezinkulu ezinkulu kufutshane ne-infrared
Icandelo leNkundla le
26 Septemba 2019 kwi-22: 09
Imibuzo evela kumfundi endithumela apha nje kubandakanya iimpendulo zam:
"Ke uLusifa yintsholongwane efuna ukuhlasela uMthombo?"
"Umthombo yi" ndawo "/" iseli yesisele "enayo yonke idatha evela kwindalo iphela (" evela ") evela kuConsciousness?"
Ewe, umthombo,, ngokungathi kunjalo, ikhowudi ebandakanya konke (ebizwa ngokuba yi 'superposition' kwi-quantum fiziksi): iseli yento yonke.
Iiseli ze-Totipotent stem zenziwa kwiseli yeseli: iifom zokwazi kunye nomsebenzi owahlukileyo wokuyila. Ezi ziiseli ze-stemotem stem cell (nceda zakhe / zenze) iindawo zendalo, kanye njengoko iiseli zesizulu esipheleleyo sinceda ukubumba amalungu, amalungu amalungu omzimba, njl njl.
Ke ngoku ezo ntlobo zibonisa ngokupheleleyo ukuba zineekhowudi zokuyila kuthi (ezivela kwiseli yento yonke leyo).
Ngokusilinga ukuba siqhagamshele kwinkqubo yentsholongwane (ngokudlula ngobunye beKurzweil) intsholongwane kaLusifa ifumana ikhowudi yethu kwaye inokuthi ihlasele iseli yesiseko.
Iindaba ezimnandi zezokuba sinayo ikhowudi yokulwa intsholongwane. Ke singenza / singayenza loo nto ngokuzikhumbuza kwakhona ukuba siyazi (iiseli eziziiseli zodidi olupheleleyo). Ke akusafuneki sichonge lo mzimba (i-avatar kule simulation yentsholongwane), kodwa ngengqondo yethu. Lo mzimba yi-avatar kuphela esigcina ngayo ngaphakathi kwesi simulation yentsholongwane (ukufunda intsholongwane).
26 Septemba 2019 kwi-23: 31
"Nge-stem cell ndicinga ngedatha ebonakalayo / iSim / ingqikelelo kunye nokuqonda yinkcazo yokungayibonakalisi komntu le datha okanye indawo yokuqikelela / isikrini se-Sim"
Ngale 'stem cell yayo yonke into eyiyo' ndithetha: idatha ekwi-superposition (onke amathuba asekhona). Iiseli zesiseko esipheleleyo zinendawo engezantsi ye 'stem cell yazo zonke izinto ezikuyo' kwaye ke zikwindawo ephezulu kakhulu kwingingqi yazo engaphantsi. Ukuqonda ke kuyindlela yokuqala yokudala evela kumthombo. Ngamafutshane, iiseli ze-stopotem stem zivela kwi-cell stem (kumfanekiso).
Ukuziva ke kuvela kwikhowudi yomthombo (masithi iseli yesiseko apho lonke ulwazi lukhona 'kwindawo ephezulu'). Ikhowudi yemvelaphi ke inike imilo yokwazi. Ukwazi emva koko kuqalisa ukudala; apho yonke imvo inomsebenzi wayo. Ukuqonda ke kuyindlela yokuqala enomsebenzi wokuyila umntu ngamnye.
Zonke ezi ntlobo zokuqonda (ezivela kwimvelaphi / 'iseli yesiseko sayo yonke into / /' umthombo wolwazi kwindawo ephezulu ') zenze inxenye yendalo yonke.
Ukuqonda ngokuqinisekileyo kungumbukeli kwaye kwangaxeshanye umyili wendalo iphela. Isibhakabhaka luqikelelo lwezinto ezibonakalayo (okanye ukubonakaliswa) kokudityaniswa kwezinto ezihlanganisiweyo zolo hlobo lokuqonda. Ke thina ngokwethu singabakhi bemvelo yendalo yokulinganisa (okanye mhlawumbi bhetele: "ubume bendalo"); ukusuka kwindalo yonke.
Ukuqonda ke ngoko kuyilo lokudalwa (ngokudibeneyo nazo zonke ezinye iindlela zokuziva) kwaye kwangaxeshanye uqaphele izinto (zezendalo).
Olu vavanyo lwentsholongwane yangoku / le ndalo iphela (esiyijonga nge-avatar yethu) ikopi nje engentle yokoqobo, esikujonga ngoku. Yakhelwe ukutshontsha ikhowudi yethu kunye nokukwazi ukungena kumthombo.
27 Septemba 2019 kwi-00: 44
Umdlalo omkhulu 'weNxaki, ukuSabela, ukuSombulula' ocacayo kukuba apho imeko iya konakaliswa khona ukuze kungabikho lusindiso kwaye kuya kubakho isikhalo ngo "izulu elitsha nomhlaba omtsha" (ihanjiswe ngumesiya) yiza. Imfazwe yehlabathi yokugqibela iya kuba negalelo elikhulu. Isintu siya kufumana eli lizwe litsha lokulinganisa ngemikhono evulekileyo kwaye ke ngoko siya kuwela kumgibe we-AI weLuciferian.
27 Septemba 2019 kwi-08: 51
I-China ihola indlela ngetekhnoloji eqhelekileyo yeluciferian.
27 Septemba 2019 kwi-12: 17
Sele sibona amanyathelo okuqala kwicala lelizwe lokwenyani. Iqala ngento yokwenene:
27 Septemba 2019 kwi-12: 25
27 Septemba 2019 kwi-19: 03
I-2020 ingunyaka ovuzayo (unyaka we-leap) kunye nonyaka apho igridi ye-5g iya kuphunyezwa ngokubanzi kwi-IoT. IAmsterdam (e-Arena) iya kuba yelebhu entle yovavanyo
28 Septemba 2019 kwi-14: 26
Ngaba ndim okanye ngaba imibhalo yam ayibhalwa rhoqo?!
28 Septemba 2019 kwi-15: 32
Oko kuxhomekeke kwimodareyitha
« "Inyani njengoko siyibona" ​​incwadi uMartin Vrijland ngoku ikhoyo
Isicatshulwa esiya kwiNtetho (i-TTS) kunye neehologramu ezinjengempilo eneMicrosoft Hololens 2 »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.071.931